Cabdirisaaq Macalin Cilmi: Bogga Hore
Ku soo Dhawaada Bogga Rasmiga ah ee Mudane :C/risaaq Macalim Cilmi Ku leeyahay barta Internetka.Boggani,waxaad ka heli doontaan Sheekooyin,Faallooyin ,Maqaallo iyo warar idin xiisa galiya .
Sidoo kale ,Boggani waa mid innaga wada dhaxeeya oo qof kastoo doonayo inuu soo bandhigo ,wax ummadda Aduun iyo Aakhiraba anfac uleh ,uu fursad uheli doono inuu ku qoro halkan.
Waxaan idinka codsanaynaa ,inaad nalawadaagtaan aragtidiina la xidhiidha habsami usocodka howlaha boggani.Si taasi idinkugu sooro gashana waxaa boggu leeyahay qeybo kuu sahlayo inaad si qarsoodi ah codkaada uga dhiibatid ,guud ahaan bogga iyo gaar ahaan qoraalada kusoo baxayaba.
Marka aad booqatid ,ama akhrisatid qormo kastaahi waxay leeyahay amaba ku lifaaqan weydiimo iyo jawaabo is daba taxan oo midkii aad sax u aragtid aad ka doorani kartid.
Tusaale:Fal-celin halka ay ku qorantahay ,waxaa daba taxan jawaabo ay ka mid yihiin:
.Xiiso leh-waa haddii ad la dhacday waxa meesha kuqoran.
.Igama gadmin:Haddii ay kuxiiso galin waayeen waxa aad halkaasi ku aragtay.